Pringles: Izvo Zvese Zvakatanga Nemakuki, Uye Kufambira Mberi KuRobotic Sachigaro - Potato System Magazini
в Success Story, Kudzokorora
Pamutemo, Pringles machipisi akareba kunzi makuki, sezvo zvirimwa zvemazamu zviri pasi - chete 42%, zvimwe zvacho hupfu uye starch. Nekuda kweiyi nzira yakasanganiswa, Procter & Gamble, yaive muridzi kusvika 2011, yakakwanisa kunzvenga kubhadhara mutero wakawedzerwa kwenguva yakareba, zvaidhura kwazvo kugadzira machipisi muUK.
Muna 1956, Procter & Gamble mushandi Alexander Liepa, uyo aive chemistem nehunyanzvi, akauya neresipi yezvipisi izvi. Asi zvakamutorera mamwe makore akati wandei kuti aigadzirise uye atsvage kudyara, saka Pringle's Newfangled Potato Chips haina kuoneka mumusika weNorth America kusvika Gumiguru 1968.
Zvinoenderana neimwe vhezheni, zita racho rakauya zvizere netsaona. Vashandi veProcter & Gamble vakaputsa misoro yavo vachiedza kuigadzira. Vamwe vavo, vachitsvaga mudhairekitori, vakaona zita rePringle Drive, iyo yaive mutaundi reCincinnati, Ohio. Pane imwezve nyaya - machipisi akatumidzwa zita raMark Pringle, uyo muna 1937 akaronga nzira nyowani yekugadzira mbatatisi. Ngazvive sezvazviri, zita rekuti Pringles rakanyatsoda manejimendi ekambani uye yakatenderwa.
Muna Chivabvu 2009, Dare Repamusoro reLondon rakatonga kuti machipisi aive mbatatisi, saka Procter & Gamble vaifanirwa kubhadhara £ 100m ($ 156m) mumutengo wakawedzerwa pamakore apo machipisi akatengeswa sechikafu muUK, pamwe nekubhadhara mune ramangwana. £ 20 miriyoni pagore.
Muna 1994, UK yakatanga kushanda mutemo unosimbisa maitiro ekubhadharisa mutero. Zvinoenderana nemitemo, hapana mutero pazvikafu zvakawanda munyika. Izvo chete zvinosara ndezvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kumatatata, kusanganisira maFrench mafrizi, machipisi uye zvimwe zvinhu zvakafanana. Kwemakore akati wandei, Procter & Gamble yakatsigira kuti machipisi ayo ane mbatatisi diki kuti isabhadhariswe mutero.
Muna 2011, Procter & Gamble vakasarudza kutengesa kodzero ku Pringles brand kuna Diamond Foods Inc, vachikoshesa kuita $ 2,35 billion.Asi nekuda kwechimwe chikonzero chisingazivikanwe, chibvumirano hachina kuzadzikiswa. Nekudaro, mu2012, Kellogg's, anotungamira mukugadzira chikafu muUnited States, akatenga mucherechedzo we $ 2,7 bhiriyoni.
Mu2018, Kellogg's uye Vietnamese chikafu chinogadzira Acecook akabatana kuunza ma noodles pakarepo kumusika, anonziwo Pringles, naJulius Pringle ane mukurumbira pakapaketi. Pakutanga, ma noodles akatengeswa chete muJapan, ndokuzoonekwa muUnited States.
MunaFebruary 2020, Kellogg's, pamwechete naGravitonus (chikamu cheWARP), vakaunza iyo chigaro cheMutambo wekutamba. Iyo ine yakavakirwa-mukati kusimba bracelet, iyo inoongorora maitiro eiyo gamer uye inotumira data kune yakakosha kunyorera. Kubva pavari, chirongwa ichi chinotarisa yakanakisa rhythm yemutambo kune muridzi. Uye zvakare, ruoko rwe robhoti rwakaiswa pachigaro, runounza machipisi kumukanwa wemutambi kana ave nenzara.
Nhasi maPringles anotengeswa munyika zana nemakumi mana pasirese. Uye kune mumwe nemumwe wavo, vashambadzi vaKellogg vakagadzira yakatarwa tambo yezvipisi zvemuchina uyu.
Tags: Pringleskugadzira machipimachipisi